Umthetho oManyeneyo | Law & More B.V.
Umthetho weShishini / Umthetho woShishino
UMTHETHO WENKUNDLA YEMBANKRUPTCY
UKUFudUKELA KWABANYE KWAKHONA- KUNYE NOMTHETHO WOKUFUDUKELA
UMGAQO-NKQUBO WOKUZIPHATHA (IP)
ISIPHUMO KUNYE NEZOQINISEKISO ZEXESHA LOKUGQIBELA
Ngaba uyafuna ukuseka ishishini? Okanye sele ungusomashishini? Ukuba kunjalo, ngokuqinisekileyo uya kujongana nomthetho weshishini. Okwangoku ngexesha lokusekwa kweshishini kuya kufuneka ujongane nombuzo wokuba loluphi uhlobo lwenkampani olufanelekileyo. Zonke iintlobo zezivumelwano kufuneka zenziwe. Kwiminyaka emininzi inokutshintsha ngaphakathi kwinkampani. Ifom yenkampani isenokungalungeki kwakhona. Ingxabano inokuthi ivele phakathi kwabanini-zabelo okanye phakathi kwabadibeneyo.
KUFUNEKA KUFUNA UMNYANGO WOKHUSELEKO?
BUZA NGOBUCHULE BUMBUTHO
Ngaba uyafuna ukuseka ishishini? Okanye sele ungusomashishini? Ukuba kunjalo, ngokuqinisekileyo uya kujongana nomthetho weshishini. Okwangoku ngexesha lokusekwa kweshishini kuya kufuneka ujongane nombuzo wokuba loluphi uhlobo lwenkampani olufanelekileyo. Zonke iintlobo zezivumelwano kufuneka zenziwe. Kwiminyaka emininzi inokutshintsha ngaphakathi kwinkampani. Ifom yenkampani isenokungalungeki kwakhona. Ingxabano inokuthi ivele phakathi kwabanini-zabelo okanye phakathi kwabadibeneyo. Okanye kusenokwenzeka ukuba ishishini lakho alinazinto zaneleyo zexabiso lolwelo. Law & More Uyingcali kwindawo yomthetho wamashishini amaDatshi. Ukususela kumzuzu wokusekwa kude kube ngumzuzu wokupheliswa kwenkampani, sinokukunika iingcebiso zomthetho kunye nezemali.
> Umthetho osemthethweni wabantu
> Ulawulo lweArhente
> Ukuhlanganiswa kunye nokufunyanwa
> Ukungabi nantlonelo kwengqondo
Umthetho osemthethweni wabantu
Thina Law & More inokukunceda ekukhetheni ifom yenkampani efanelekileyo. Umahluko unokwenziwa phakathi kweefom ezinobuntu obusemthethweni kunye neefom ngaphandle kobuntu obungokwasemthethweni. Ukuba ishishini linobuntu obusemthethweni, linokuthatha inxaxheba kuthengiselwano olusemthethweni njengabantu bendalo. Kwimeko enjalo inkampani yakho iyakwazi ukugqiba izivumelwano, ukuba nezinto kunye namatyala kwaye inokuba noxanduva.
Ukulawulwa kweQabane / iAdvocate
Tsalela umnxeba +31 40 369 06 80
Kutheni ukhetha Law & More?
Law & More ifumaneka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu
Ukusuka ngentsimbi ye-08: 00 kuye kweye-22: 00 nangeempelaveki ukusuka ngo-09: 00 kuye ku-17: 00
Unxibelelwano olulungileyo nolukhawulezayo
Amagqwetha ethu amamela ityala lakho kwaye uze
Isicwangciso sokusebenza esifanelekileyo
Indlela yethu yokusebenza iqinisekisa ukuba i-100% yabathengi bethu bayasincoma kwaye sikalwe nge-avareji nge-9.4
"Law & More magqwetha
ingxaki yomthengi ”
Xa ufuna ukuqhuba umbutho, kufuneka ukhethe ifom yenkampani. Yeyiphi indlela esemthethweni efanelekileyo ngokuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo, ezinje ngeemfuno zokufakwa, ubuntu obungokwasemthethweni, ukudityaniswa kunye noxanduva oluninzi kunye nokudluliselwa kwezabelo. Kwaye kuthekani ukuba elinye lamaqabane ebambiswano ngokubanzi (VOF) lifuna ukuyishiya inkampani? Kwaye uthini ngeFlex-BV? Ezi zifundo zilawulwa ngumthetho wenkampani. Izinto ezininzi zinokucwangciswa ngokweekhontrakthi kwangaphambili. Yiyo loo nto kucetyiswa ukubandakanya iinkonzo zegqwetha lezorhwebo ngaphambi kokuseta inkampani.
Ngaba, njengenkampani, nizimisele ukusebenzisana nezinye iinkampani ngeenjongo zokugcina indawo yenu yentengiso? Okanye, ngokuchaseneyo, ngesicwangciso sokungena kwintengiso entsha? Ukuba ufuna ukwenza umanyano olucwangcisiweyo sinokucebisa ngomngcipheko kunye nezibonelelo. Ngapha koko, sinako, kunye, ukufumana ukuba zeziphi iindlela zentsebenziswano ezifanelekileyo.
Amagqwetha ethu akulungele
Umthetho wokufudukela kwelinye ilizwe
Ukuhlanganiswa kunye nokufunyanwa
Ngaba ujonge ukudibanisa inkampani yakho nomnye, kuba ufuna ukukhuthaza ukukhula kumzekelo? Kukho iintlobo ezintathu zokudityaniswa: ukudityaniswa kwenkampani, ukudibanisa isitokhwe kunye nokudityaniswa kwezomthetho. Eyona ilungele inkampani yakho ixhomekeke kwimeko ethile. Law & More amagqwetha anokukucebisa ngalo mbandela.
Ngamanye amaxesha enye inkampani inokuba nomdla kweyakho. Ingakunika ukuba uthengise kuye ishishini lakho. Ukuba ujonge ukwamkela esi sicelo, ke singakunika ingcebiso ngaphambi kwexesha. Sinokuxoxa nawe.
Ukuba inkampani ayifuni ukuba izabelo zabo zithengiswe kwaye umntu ogqithayo usondela kubaninizabelo, sithetha ngokuthatha ngaphezulu. Siyayazi indlela yokukhusela inkampani yakho kwiimeko ezinje kwaye sinokukunceda ngeengcebiso zomthetho.
Ngaphandle koko, kubalulekile ukuba wenze ngokukhuthala elifanelekileyo, ngakumbi ukuba wena njengenkampani uthenga enye inkampani. Ufuna lonke ulwazi olufanelekileyo ukwenza ukhetho lokucinga malunga nokudibanisa okanye ukufumana.
Amagqwetha ahlangeneyo Law & More Uya kukunika uthethathethwano olufanelekileyo lomthetho malunga nenkampani yakho. Siguqulela umthetho ngokwamagama afanelekileyo, ukuze ukwazi ukuxhamla kwiingcebiso zethu. Kufuphi, Law & More unokukubonelela ngoncedo lwezomthetho kule miba ilandelayo:
Intsebenziswano phakathi kweenkampani
• ukudibanisa kunye nokuthengwa
• Ukuxoxa-thethana ngokudibanisanayo xa kufikwa kwimpikiswano phakathi kwabanini zabelo kunye / okanye nabalingane
Ukungabi nantlonelo kwengqondo
Sithanda ukucinga kokuyila kwaye sijonge ngaphaya kwemicimbi esemthethweni yemeko. Imalunga nokufikelela kwisiseko sengxaki kunye nokuyisingatha kumcimbi omiselweyo. Ngenxa yokungabikho kobukrelekrele kwengqondo yethu kunye namava abathengi bethu banokuqiniseka ngenkxaso yomthetho esebenzayo.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni Law & More ndingakwenzela njengeziko lezomthetho e-Eindhoven?
Sitsalele umnxeba kule nombolo yefoni +31 40 369 06 80 ye-imeyile nge-imeyile:
Mr. UTom Meevis, igqwetha kwa Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Mr. UMaxim Hodak, ummeli kwi & Ngaphezulu - maxim.hodak@lawandmore.nl
UMthetho wo shishino